Shijiazhuang Guta Xinsheng Chemical Co., Ltd. (Xinsheng Chemical) inovambwa muna 1993 uye ine nzvimbo yepasi ye13,230 sq. metres inosanganisira nzvimbo yekuvaka ye10,305 sq. metres.Kune airport uye yenyika mugwagwa padhuze nekambani yedu, yakavimbiswa traffic iri nyore.Isu tinotora mukana weyakakura tekinoroji, yakawanda yekugadzira zviitiko, yepamusoro marabhoritari midziyo, uye yepamusoro kemikari synthesis yekugadzira mutsara.Zvichakadaro,
Zvigadzirwa zveXinsheng Chemical zvinotengeswa zvakanaka kuChina nekune dzimwe nyika mune brandname yeMeiyu.Zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika zvinosanganisira kunyanya Zinc Phosphate series, Aluminium Tripolyphosphate series neAluminium Phosphate series, iyo inoshandiswa zvakanyanya mupendi yenjanji, motokari, zvikepe zvichingodaro. Aluminium Tripolyphosphate series, 720 matani eAluminium Phosphateseries.Zvigadzirwa zvinoenderana nemitemo yenyika, REACH kunyoreswa, ROHS standard zvinodiwa, SGs kuyedzwa, uye ISO9001 certification system.
Shijiazhuang Guta Xinsheng Chemical Co., Ltd. yakavambwa zviri pamutemo.
Yakanyoreswa MEIYU trademark.
Zinc phosphate zvigadzirwa zvakatengeswa kuJapan, Vietnam, Thailand nedzimwe nyika.
Chigadzirwa chitsva chePhosphorus Zinc White (chinoshamwaridzana nharaunda zinc phosphate) chakagadzirwa kuti chienderere mberi kuratidza kuti kukosha kwekushandisa kwezinc phosphate kwakafanana neiyo yekunze PZ20 uye yasvika paREACH ROHS mwero.Kurumbidzwa nevatengi.
Akatora chikamu muRussia Coatings Exhibition.
Akatora chikamu muDubai Coatings Exhibition.
Akatora chikamu muThailand Coatings Exhibition.
Fekitori itsva ye13,230 square metres ichamiswa muXinle City Economic Development Zone, ese anogadzirwa neautomatic equipment.
Kutama kubva kufekitori yekare kuenda kunzvimbo itsva muna 2020 kuchawedzera huwandu hwekugadzira ka20.
Tora chikamu muGuangzhou Coatings Exhibition.
Zuva rakatemerwa kutora chikamu muShanghai Coatings Exhibition.
Kuzivikanwa sechigadzirwa chakakwana, mukurumbira munyika.
Chokwadi, hutsva, kuvimbika, kuhwina, kutenda.
Kune "zvishanu zvakakosha" seyero: kutenga kunofanirwa kuedzwa, kugadzirwa kunofanirwa kugadzikana, kwakasimba kunofanirwa kuvimbiswa, kushanda kunofanirwa kuchinjika, uye fekitori inofanirwa kuve nemutoro.
Hunhu kutanga, tekinoroji-yakatarisana, zviroto, uye kurwa kwakashinga.
Kugadzirisa matambudziko sechinhu chinodiwa.Tora altruism sehwaro uye chinangwa chekusahwina-kuhwina.